Ny haran-dranomasina dia rafitra sarotra sy mavitrika ary sarotra ny maminavina ny toe-javatra ho avy. Vokatr'izany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny mpitantana raha tsy misy ny fahalalana tonga lafatra. Na dia mety hitarika ho amin'ny fisalasalana handray andraikitra aza izany indraindray, ny tsy fisian'ny fitantanana mavitrika amin'ny haran-dranomasina dia mety hisy vokany lehibe sy tsy ampoizina. Ny fanamby amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miaraka amin'ny fahalalana tsy feno dia niteraka ny foto-kevitra momba ny fitantanana adaptatera, izay ahitana ny fanaraha-maso ho singa fototra.
Ny fitantanana adaptive dia manaiky fa ny hetsika fitantanana dia mamorona fahafahana hianatra sy hanatsara. Ny tsingerin'ny fitantanana adaptive dia dingana voarafitra sy mitohy izay manome fototra ho an'ny fandraisana fanapahan-kevitra matanjaka manoloana ny fisalasalana amin'ny alalan'ny fanaraha-maso sy ny valin'ny fianarana.
Ny fitantanana adaptive dia manome fomba iray ho an'ny:
Cycle fitantanana adaptive. Nalaina avy amin'ny Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) Fikarohana momba ny ranomasina sy ny atmosfera